Mitemo Yekushandisa - ExoSpecial
Webhusaiti yeExoSpecial.com ibasa rine copyrighted reExoSpecial. Mamwe maficha eSaiti anogona kunge ari pasi pemamwe nhungamiro, mazwi, kana mitemo, iyo inozoiswa paSiti ine chekuita neakadaro maficha.
Iyi Mitemo Yekushandisa yakatsanangura zviri pamutemo zvisungo uye mamiriro anotarisira kushandisa kwako Saiti. NEKUSVIKA PASAiti, URI KUTEVEDZERA IYI MITAMBO uye unomiririra kuti une mvumo uye kugona kupinda muMitemo iyi. UNOFANIRA KUVA ZVINOGONA 18 YEARS EZERA KUTI UBANDIKE PASAiti. KANA UCHIPOKANA NEIMWE YEMATEMO AYA, USASHANDISE SITITI.
Zvichienderana neMitemo iyi. ExoSpecial inokupa iwe isingachinjike, isiri-yakasarudzika, inodzoserwa, ine shoma rezenisi yekuwana iyo Saiti chete kune yako wega, isiri yekutengeserana kushandiswa uye inorambidza zvachose chero nzira yekukwenya data.
Zvimwe Zvinorambidzwa. Kodzero dzakatenderwa kwauri muMitemo iyi dziri pasi pezvirambidzo zvinotevera: (a) hauzotengese, kurenda, kukonesa, kuendesa, kugovera, kugovera, kugamuchira, kana kushandisa zvisirizvo Saiti; (b) iwe hauzoshandure, kuita mabasa ekubva, disassemble, dzosera kuunganidza kana kudzosera injinjini chero chikamu cheSiti; (c) iwe haufanire kuwana iyo Saiti kuitira kuvaka yakafanana kana yemakwikwi webhusaiti; uye (d) kunze kwekunge zvataurwa apa, hapana chikamu cheSaiti chinogona kukopwa, kudzokororwa, kugovaniswa, kudhindwazve, kudhawunirodwa, kuratidzwa, kutumirwa kana kutumirwa mune chero chimiro kana neimwe nzira kunze kwekunge zvaratidzwa neimwe nzira, chero kuburitswa kweramangwana, kugadzirisa, kana kumwe kuwedzera kune kushanda kweSaiti kuchave kuri pasi peMitemo iyi. Yese copyright uye zvimwe zviziviso zvevaridzi paSaiti zvinofanirwa kuchengetwa pamakopi ese ayo.
Kambani inochengeta kodzero yekuchinja, kumisa, kana kumisa Saiti kana pasina chiziviso kwauri. Iwe wakatendera kuti Kambani haizove nemhosva kwauri kana chero wechitatu-bato chero shanduko, kukanganisa, kana kumisa Saiti kana chero chikamu.
Hapana Rutsigiro kana Maintenance. Unobvuma kuti Kambani haizove nechisungo chekupa iwe chero rutsigiro maererano neSiti.
Kusingasanganisire chero Mushandisi Zvemukati zvaunogona kupa, iwe unoziva kuti kodzero dzese dzepfuma yehungwaru, dzinosanganisira kodzero, patents, zviratidzo zvekutengesa, uye zvakavanzika zvekutengesa, muSiti uye zvirimo ndezvekambani kana vatengesi veKambani. Ziva kuti Mitemo iyi uye kuwana Saiti hazvikupe chero kodzero, zita kana kufarira mukati kana kune chero kodzero dzepfuma yehungwaru, kunze kwekodzero shoma dzekuwana dzinoratidzwa muChibvumirano ichi. Kambani nevatengesi vayo vanochengeta kodzero dzese dzisina kupihwa muMitemo iyi.
Yechitatu-Bato Zvisungo & Ads; Vamwe Vashandisi
Yechitatu-Bato Manongedzo & Ads. Iyo Saiti inogona kunge iine zvinongedzo kune wechitatu-bato mawebhusaiti uye masevhisi, uye/kana kuratidza kushambadzira kune vechitatu-mapato. Kwakadaro Wechitatu-Bato Manongedzo & Ads haisi pasi pekutonga kweKambani, uye Kambani haina mhosva kune chero yechitatu-Bato Manongedzo & Ads. Kambani inopa mukana kune aya echitatu-Bato Manongedzo & Ads chete senzira yekukuitira nyore, uye haitarise, kubvumidza, kutarisa, kutsigira, waranti, kana kuita chero chinomiririra maererano neTatu-Bato Manongedzo & Ads. Kushandisa kwako ese Chechitatu-Bato Manongedzo & Ads panjodzi yako, uye unofanirwa kushandisa yakafanira nhanho yekuchenjerera uye kungwara mukuita kudaro. Paunodzvanya pane chero yeThird-Party Links & Ads, iyo inoshanda yechitatu-bato mitemo uye marongero anoshanda, kusanganisira wechitatu kuvanzika uye maitiro ekuunganidza data.
Vamwe Vashandisi. Wese mushandisi weSaiti ndiye ane mhosva kune chero uye ese ayo ega Mushandisi Zvemukati. Nekuti isu hatidzore Zvemukati zveMushandisi, unobvuma uye unobvuma kuti isu hatisi mhosva kune chero Mushandisi Zvemukati, zvingave zvakapihwa newe kana nevamwe. Unobvuma kuti Kambani haizove nemhosva yekurasikirwa kana kukuvadzwa kunoitwa semhedzisiro yekudyidzana kwakadaro.
Iwe unosunungura uye unoregedza zvachose Kambani nevakuru vedu, vashandi, vamiririri, vatevedzeri, uye vanogovera kubva, uye nokudaro unoregera uye uchisiya, yega yega yekare, yazvino uye yeramangwana gakava, kukumbira, gakava, kudiwa, kodzero, chisungo, mutoro, chiito uye chikonzero chechiito chemarudzi ese uye zvisikwa, zvakamuka kana kusimuka zvakananga kana zvisina kunanga kunze, kana zvine hukama zvakananga kana zvisina kunanga, iyo Saiti. Kana uri mugari wekuCalifornia, unosiya chikamu cheCalifornia civil code 1542 maererano nezviri pamusoro, chinoti: "general release haiwedzeri kune zvikumbiro izvo mukweretesi asingazivi kana fungidziro kuti zvirimo mukumufarira kwake nguva yekuita kusunungurwa, iyo kana yakazivikanwa naye inofanira kunge yakakanganisa kugadzirisa kwake nechikwereti."
Cookies uye Web Beacons. Kufanana nedzimwe webhusaiti, ExoSpecial inoshandisa 'makuki'. Aya makuki anoshandiswa kuchengetedza ruzivo kusanganisira zvido zvevashanyi, uye mapeji ari pawebhusaiti akawanikwa kana nemuenzi. Ruzivo urwu runoshandiswa kukwenenzvera ruzivo rwevashandisi nekugadzirisa zvemukati peji rewebhu zvinoenderana nerudzi rwebrowser yevashanyi uye/kana rumwe ruzivo.
Iyo saiti inopihwa pane "se-zvairi" uye "seinowanika" hwaro, uye kambani nevatengesi vedu vanonyatso ramba chero uye ese waranti uye mamiriro emhando ipi neipi, ingave inotsanangurwa, inoreva, kana pamutemo, kusanganisira zvese waranti kana mamiriro ekutengesa. , kusimba kwechinangwa chakati, zita, kunakidzwa kwakanyarara, kururamisa, kana kusatyora. Isu nevashambadzi vedu hatiite vimbiso yekuti saiti ichaita zvaunoda, ichave iripo pasina kukanganisa, panguva, yakachengeteka, kana isina kukanganisa, kana ichave yakarurama, yakavimbika, isina mavhairasi kana imwe kodhi inokuvadza, yakakwana, yepamutemo. , kana kuchengeteka. Kana mutemo unoshanda uchida chero waranti maererano nesaiti, zvese waranti zvakadaro zvinogumira mukufamba kwemazuva makumi mapfumbamwe (90) kubva pazuva rekutanga kushandiswa.
Mamwe matunhu haatenderi kusabatanidzwa kwezvisungo zvewaranti, saka kusabatanidzwa kuri pamusoro kunogona kusashanda kwauri. Mamwe masimba haabvumidze miganhu yekuti waranti yakarehwa inotora nguva yakareba sei, saka muganho uri pamusoro unogona kusashanda kwauri.
Kuganhurirwa pane Mutoro
Kusvika pamwero mukuru unobvumidzwa nemutemo, hapana chiitiko kambani kana vatengesi vedu vachave nemhosva kwauri kana chero wechitatu-bato kune chero yakarasika purofiti, yakarasika data, mutengo wekutengwa kwezvinhu zvinotsiva, kana chero zvisina kunanga, zvinokonzeresa, zvemuenzaniso, zvinongoerekana zvaitika, kukuvadzwa kwakakosha kana kwechirango kunobva kana zvine chekuita nematemu aya kana kushandisa kwako, kana kusakwanisa kushandisa saiti kunyangwe kambani yakaudzwa nezve mukana wekukuvadza kwakadaro. Kuwana uye kushandiswa kwesaiti iyi kuri pakufunga kwako uye nenjodzi, uye iwe uchave wega une mhosva kune chero kukuvadzwa kuchigadzirwa chako kana komputa system, kana kurasikirwa kwedata kunokonzerwa nazvo.
Kusvika pamwero mukuru unobvumidzwa nemutemo, zvisinei nechinhu chipi nechipi chinopesana nezvirimo, mutoro wedu kwauri kune chero kukanganisa kunobva kana kune chekuita nechibvumirano ichi, nguva dzose inogumira kusvika pamadhora makumi mashanu ekuAmerica (isu $50). Kuvepo kweanopfuura chirevo chimwe chete hakuzokwidzi muganhu uyu. Unobvuma kuti vatengesi vedu havazove nemhosva yechero rudzi runobva kana zvine chekuita nechibvumirano ichi.
Mamwe matunhu haabvumidze kudzikiswa kana kusabvisirwa mhosva yekukuvadza kwakaitika kana kukonzeresa, saka ganhuriro iri pamusoro kana kusabatanidzwa kunogona kusashanda kwauri.
Nguva uye Kugumisa. Zvichienderana neChikamu ichi, Aya Matemu acharamba ari musimba rakazara uye anoshanda iwe uchinge uchishandisa Saiti. Isu tinogona kumisa kana kumisa kodzero dzako dzekushandisa Saiti chero nguva chero chikonzero nekufunga kwedu, kusanganisira chero kushandiswa kweSiti kutyora Mitemo iyi. Pakugumiswa kwekodzero dzako pasi peMitemo iyi, Akaunti yako uye kodzero yekuwana uye kushandisa Saiti inopera nekukasira. Iwe unonzwisisa kuti chero kugumiswa kweAkaunti yako kunogona kusanganisira kubviswa kweMushandisi Wako zvine chekuita neAccount yako kubva kudura rehupenyu. Kambani haizove nemhosva chero ipi kwauri kune chero kubviswa kwekodzero dzako pasi peMitemo iyi.
Kambani inoremekedza zvinhu zvehungwaru zvevamwe uye inokumbira kuti vashandisi veSaiti yedu vaite zvimwe chetezvo. Nechekuita neSaiti yedu, takatora nekuita mutemo unoremekedza mutemo wekodzero uyo unopa kubviswa kwechero zvinhu zvinotyora uye kumisa vashandisi veSiti yedu yepamhepo vanodzokororwa vachityora kodzero dzezvivakwa zveuchenjeri, kusanganisira kodzero dzekodzero. Kana iwe uchitenda kuti mumwe wevashandisi vedu ari, kuburikidza nekushandiswa kweSaiti yedu, ari kutyora zvisiri pamutemo kodzero (s) pabasa, uye uchishuvira kuti izvo zvinonzi zviri kutyora zvibviswe, ruzivo rwunotevera nenzira yechiziviso chakanyorwa (zvichitevera). ku17 USC § 512(c)) inofanira kupihwa:
siginicha yako yemuviri kana yemagetsi;
kuzivikanwa kwemabasa ane kodzero yekodzero aunoti akatyorwa;
kuzivikanwa kwezvinhu zviri pamasevhisi edu aunoti ari kutyora uye zvaunotikumbira kuti tibvise;
ruzivo rwakakwana kutibvumira kuwana zvinhu zvakadaro;
kero yako, nhamba yefoni, uye kero ye-e-mail;
chirevo chekuti une kutenda kwakanaka kwekutenda kuti kushandisa zvinhu zvinopokana hakuna mvumo; uye
chirevo chekuti ruzivo rwuri muchiziviso nderwechokwadi, uye pasi pechirango chekunyepa, kuti ungave uri muridzi wekodzero inonzi yakatyorwa kana kuti wakapihwa mvumo yekumiririra muridzi wecopyright.
Ndokumbira utarise kuti, maererano ne17 USC § 512 (f), chero kusamiririrwa kwechokwadi kwechokwadi muchiziviso chakanyorwa kunoisa munhu ari kunyunyuta kumhosva yekukuvadzwa, mari uye muripo wegweta waunoitwa nesu maererano nechiziviso chakanyorwa uye kupomerwa. Kutyorwa kwekodzero.
Iyi Mitemo inodzokororwa pano neapo, uye kana tikaita chero shanduko huru, tinogona kukuzivisa nekukutumira e-mail kukero ye-e-mail yekupedzisira yawakatipa uye / kana nekutumira zvine mukurumbira chiziviso chekuchinja pane yedu. Site. Iwe une basa rekutipa yako ikozvino e-mail kero. Muchiitiko chekuti kero ye-e-mail yekupedzisira yawakatipa isiri iyo kutumira kwedu e-mail ine chiziviso chakadaro chichaita chiziviso chinoshanda chekuchinja kwatsanangurwa muchiziviso. Chero shanduko kuMitemo iyi ichashanda pamazuva ekutanga makumi matatu (30) ekarenda zvichitevera kutumira kwatinoita e-mail chiziviso kwauri kana makumi matatu (30) ekarenda mazuva zvichitevera kutumira kwatinoita chiziviso chekuchinja kweSaiti yedu. Idzi shanduko dzichashanda nekukurumidza kune vashandisi vatsva veSiti yedu. Kuenderera mberi nekushandiswa kweSaiti yedu ichitevera chiziviso chekuchinja kwakadaro kunoratidza kubvuma kwako shanduko dzakadaro uye chibvumirano chinosungwa nemitemo nemamiriro ekuchinja kwakadaro.
Ndokumbira uverenge iyi Arbitration Agreement zvakanyatsonaka. Icho chikamu chechibvumirano chako neKambani uye chinokanganisa kodzero dzako. Iine maitiro eMANDATORY BINDING ARBITRATION UYE A CLASS ACTION WAIVER.
Kushanda kweArbitration Chibvumirano. Zvese zvichemo nemakakatanwa zvine chekuita neMitemo kana kushandiswa kwechero chigadzirwa kana sevhisi yakapihwa neKambani isingakwanise kugadziriswa zvisina kurongwa kana mudare diki rematare inogadziriswa nekusunga kupokana pamunhu pasi pemitemo yeChibvumirano cheArbitration. Kunze kwekunge kwabvumiranwa neimwe nzira, hurongwa hwekupokana huchaitwa neChirungu. Ichi Chibvumirano cheArbitration chinoshanda kwauri neKambani, uye kune chero vanotsigira, vanobatana, vamiririri, vashandi, vanofanotungamira mukufarira, vatevedzeri, uye vanopa, pamwe nevashandisi vane mvumo kana vasina mvumo kana vanowana masevhisi kana zvinhu zvinopihwa pasi peMitemo.
Chiziviso Chinodiwa uye Chisina Kurongwa Kugadzirisa Kukakavadzana. Bato risati ratsvaga kupokana, bato rinofanirwa kutanga ratumira kune rimwe bato Chiziviso chakanyorwa cheKukakavadzana chinotsanangura chimiro uye hwaro hwekuda kana gakava, uye zororo rakumbirwa. Chiziviso kuKambani chinofanira kutumirwa kune legal@exospecial.com. Mushure mekunge Chiziviso chagamuchirwa, iwe neKambani mungaedza kugadzirisa chikumbiro kana kupokana zvisina kurongwa. Kana iwe neKambani mukasagadzirisa chikumbiro kana kupokana mukati memazuva makumi matatu (30) mushure mekunge Chiziviso chagamuchirwa, chero bato rinogona kutanga danho rekupokana. Huwandu hwechero muripo wekugadzirisa wakaitwa nechero bato haugone kuburitswa kune mutongi gava kusvika mushure mekunge mutongi aona huwandu hwemubairo uyo chero bato rine kodzero.
Arbitration Mitemo. Arbitration ichatangwa kuburikidza neAmerican Arbitration Association, imwe yakamiswa imwe nzira yekugadzirisa gakava inopa kukwikwidza sezvakatsanangurwa muchikamu chino. Kana AAA isipo kuti igadzirise, mapato anobvumirana kusarudza imwe ADR Provider. Mitemo yeADR Provider ichatonga zvese zvinokonzeresa kunze kwekunge mitemo yakadai ichipokana neMitemo. Mitemo yeAAA Consumer Arbitration Mitemo inotonga kupikisa inowanikwa online paADR.org kana kufonera AAA pa1-800-778-7879. Kupopotedzana kuchaitwa nemunhu mumwe chete, asina kwaakarerekera. Chero zvichemo kana kukakavara uko huwandu hwese hwemubairo hunotsvagirwa huri pasi peZviuru gumi zvemadhora ekuUS (US $10,000.00) zvinogona kugadziriswa kuburikidza nekusunga kusawirirana-kwakavakirwa, pane sarudzo yebato iri kutsvaga rubatsiro. Pazvichemo kana kukakavara uko mari yese yemubairo unotsvagwa iGumi remadhora ekuUS (US $10,000.00) kana kudarika, kodzero yekunzwa nyaya ichatemwa neArbitration Rules. Chero kunzwa kuchaitwa munzvimbo iri mukati me100 mamaira kubva kwaunogara, kunze kwekunge uchigara kunze kweUnited States, uye kunze kwekunge mapato abvumirana neimwe nzira. Kana iwe uchigara kunze kweUS, mutongi gavagadzike achapa mapato chiziviso chine musoro chezuva, nguva nenzvimbo yekunzwa kupi nekupi kwekutaura. Chero mutongo pamusoro pemubairo unopiwa nemutongi anogona kupinzwa mudare ripi neripi rine masimba. Kana mutsinhanisi akakupa mubairo wakakura kudarika wekupedzisira kupedzwa kwawakaitirwa neKambani usati watanga kupokana, Kambani ichakubhadhara iwe mubairo mukuru kana $2,500.00. Bato rega rega richabhadhara mari yaro uye mari inobhadharwa kubva mukupokana uye ichabhadhara chikamu chakaenzana chemubhadharo uye mutengo weADR Provider.
Yekuwedzera Mitemo yeKusatarisika Kwakavakirwa Arbitration. Kana kusatarisika kwakanangana nekupokana kwasarudzwa, kupikisa kuchaitwa nerunhare, pamhepo uye/kana zvichibva pane zvakanyorwa chete; iyo chaiyo nzira ichasarudzwa nebato rinotanga kupesana. Kupopotedzana hakuzosanganisire chero chimiro chemunhu nemapato kana zvapupu kunze kwekunge kwakabvumiranwa nemapato.
Nguva Inogumira. Kana iwe kana Kambani ichitsvaga kupokana, danho rekupokana rinofanirwa kutangwa uye/kana kukumbirwa mukati memutemo wezvipimo uye mukati menguva yakatarwa yakatemwa pasi peMitemo yeAAA yechikumbiro chakakodzera.
Simba reMugadziri. Kana kukakavara kwatangwa, mutongi gava achasarudza kodzero nezvikwereti zvako neKambani, uye kupokana hakuzobatanidzwa nedzimwe nyaya kana kubatanidzwa nedzimwe nyaya kana mapato. Mutongi wedare achave nemvumo yekupa zvisungo zvinorasa zvese kana chikamu chechero chikumbiro. Mutongi wedare achava nemvumo yekupa kukuvara kwemari, uye kupa chero rubatsiro rusiri rwemari kumunhu ari pasi pemutemo unoshanda, Mitemo yeAAA, uye Mitemo. Mutongi achapa mubairo wakanyorwa uye chirevo chechisarudzo chinotsanangura zvakakosha zvakawanikwa uye mhedziso panobva mubairo. Mutongi wedare ane mvumo imwe cheteyo yekupa ruyamuro pahwaro hwega hwega hungave nemutongi wedare redzimhosva. Mubairo wemurevereri ndewekupedzisira uye unosunga pauri neKambani.
Waiver yeJury Trial. MAPATO ANOSENGESA KODZERO DZAVO DZEMUGWARO UYE NEMITEMO YEKUENDA KUDARE UYE OKUYENGWA MBERI REMUTONGI KANA JURY, panzvimbo pacho achisarudza kuti zvichemo zvese nemakakatanwa zvichagadziriswa nekupokana pasi peChibvumirano cheKuyananisa. Matanho ekudzvinyirirwa kazhinji ane mashoma, anoshanda zvakanyanya uye asingadhure pane mitemo inoshandiswa mudare uye anofanirwa kuongororwa zvishoma nedare. Kana paine kupokana kuchimuka pakati pako neKambani mune chero nyika kana dare remubatanidzwa musutu yekusiya kana kumanikidza mubairo wekupokana kana neimwe nzira, IWE NEKAMPANI INOREVA KODZERO DZESE KUYEDZA JURY, pachinzvimbo chekusarudza kuti gakava rigadziriswe. nomutongi.
Waiver of Kirasi kana Consolidated Zviito. Zvese zvichemo nemakakatanwa ari mukati mechikamu chechibvumirano ichi chekupokana kunofanirwa kutongwa kana kukwidzwa pamunhu uye kwete padanho rekirasi, uye zvichemo zvevatengi kana mushandisi vanopfuura mumwechete hazvigone kurevererwa kana kukwikwidzwa pamwe chete kana kubatanidzwa neizvo zvemumwe mutengi. kana mushandisi.
Kuvanzika. Zvinhu zvese zvekuenderera mberi kwekupokana zvichava zvakavanzika. Mapato anobvumirana kuchengetedza zvakavanzika kunze kwekunge zvichidikanwa nemutemo. Iyi ndima haizotadzise bato kuendesa kudare remutemo chero ruzivo runodikanwa kumanikidza Chibvumirano ichi, kumanikidza mubairo wekupokana, kana kutsvaga kuregererwa kana kuenzana.
Severability. Kana chero chikamu kana zvikamu zveChibvumirano cheArbitration chikaonekwa pasi pemutemo sechisina basa kana kuti chisingatevedzwe nedare rine masimba, ipapo chikamu chakadaro kana zvikamu hazvizove nesimba uye zvinozoita uye zvichabviswa uye chikamu chasara cheChibvumirano chichaitwa. enderera mberi nesimba rakazara uye nemhedzisiro.
Right to Waive. Chero kodzero kana zvipimo zvatarwa muChibvumirano cheArbitration chinogona kuregererwa nebato rinenge richirehwa. Kuregera kwakadaro hakuzoregi kana kukanganisa chero chikamu cheiyi Arbitration Agreement.
Kupona kweChibvumirano. Iyi Arbitration Agreement ichapona kupera kwehukama hwako neKambani.
Dare Rezvikwereti Diki. Zvakadaro zviri pamusoro, iwe kana Kambani munogona kuunza chiitiko chemunhu mudare diki rezvikwereti.
Emergency Equitable Relief. Zvisineyi zviri pamusoro, rimwe bato rinogona kutsvaga rubatsiro rwechimbichimbi pamberi pehurumende kana dare remubatanidzwa kuitira kuchengetedza chimiro chakamirira kuwirirana. Chikumbiro chezviyero zvenguva pfupi hachizoonekwa sekuregererwa kweimwe kodzero kana zvisungo pasi peichi Chibvumirano cheArbitration.
Zvikumbiro Hazvienderane Nekupokana. Zvisineyi nezviri pamusoro, zvichemo zvekusvibisa zita, kutyorwa kweComputer Fraud and Abuse Act, uye kukanganisa kana kushandisa zvisizvo patent yerimwe bato, kodzero, chiratidzo chekutengeserana kana zvakavanzika zvekutengeserana hazvizove pasi peChibvumirano cheArbitration. Chero mamiriro ezvinhu apo Chibvumirano cheArbitration chapfuura chinobvumira mapato kuti akwikwidze mudare, mapato anobvumirana kuendesa kune hutongi hwematare ari mukati medunhu reLouisiana, nekuda kwezvinangwa zvakadaro.
Iyo Saiti inogona kunge iri pasi peUS yekutonga kunze kwemitemo mitemo uye inogona kuve pasi pekutumira kunze kana kupinza mitemo kune dzimwe nyika. Unobvuma kusatumira kunze, kutumira kunze, kana kuendesa, zvakananga kana zvisina kunanga, chero data reUS rehunyanzvi rakatorwa kubva kuKambani, kana chero zvigadzirwa zvinoshandisa data rakadaro, zvichityora mitemo yeUnited States kana mirau.
Kana uri mugari wekuCalifornia, unogona kumhan’ara zvichemo kuChichemo Rubatsiro Unit yeDivision of Consumer Product yeCalifornia Department of Consumer Affairs nekuvanyorera nekunyora pa400 R Street, Sacramento, CA 95814.
Zvemagetsi Kutaurirana. Nhaurirano dziri pakati pako neKambani dzinoshandisa nzira dzemagetsi, ungave uchishandisa Saiti kana kutitumira maemail, kana kuti Kambani inotumira zviziviso paSaiti kana kutaurirana newe kuburikidza neemail. Nezvinangwa zvekondirakiti, iwe (a) unobvuma kugashira nhaurirano kubva kuKambani nenzira yemagetsi; uye (b) inobvuma kuti zvese zvisungo nemamiriro, zvibvumirano, zviziviso, kuburitswa, uye kumwe kutaurirana kunopihwa neKambani kwauri nemagetsi zvinogutsa chero zvisungo zvepamutemo izvo kutaurirana kwakadaro kwaizozadzisa kana kuri kunyora kwekunyora.
Mitemo Yese. Aya Matemu anoumba chibvumirano chese pakati pako nesu maererano nekushandiswa kweSiti. Kutadza kwedu kushandisa kana kumanikidza chero kodzero kana kupihwa kweMitemo iyi hakuzoshande sekuregererwa kwekodzero yakadaro kana kupa. Mazita echikamu muMatemu aya ndeekurerutsira chete uye haana mutemo kana chibvumirano chekuita. Shoko rokuti "kusanganisira" rinoreva "kusanganisira pasina muganhu". Kana chipi nechipi cheMitemo iyi chichinzi hachishandi kana kuti hachitevedzerwi, zvimwe zvipimo zveMitemo iyi zvichange zvisina kukanganiswa uye gadziriro isingaite kana kuti isingateverike ichanzi yakagadziridzwa kuitira kuti ishande uye ishandiswe kusvika pamwero mukuru unobvumirwa nemutemo. Hukama hwako neKambani ndehwemukontrakta akazvimirira, uye hapana bato ari mumiriri kana mubatsiri wemumwe. Iyi Mitemo, uye kodzero dzako nezvisungo zviri pano, hazvigone kupihwa, kupihwa chibvumirano, kupihwa, kana neimwe nzira kutamiswa newe pasina mvumo yakanyorwa neKambani, uye chero kuedza kupihwa, chibvumirano, kutumwa, kana kuchinjisa kutyora zviri pamusoro. void. Kambani inogona kupa zvakasununguka aya Matemu. Matemu nemamiriro akatsanangurwa muMitemo iyi achange achisunga kune vanopihwa.
Trademark Information. Zvese zviratidzo, marogo uye masevhisi mamaki anoratidzwa paSaiti zvinhu zvedu kana zvevamwe vechitatu-mapato. Iwe haubvumidzwe kushandisa mamaki aya pasina mvumo yedu yakanyorwa yakanyorwa kana mvumo yemunhu wechitatu angave muridzi weMaki.
Kune chero mibvunzo maererano nepolicy iyi, tapota taura legal@exospecial.com chero nguva.